Dowladda Lubnaan oo Sharci ka dhigtay Beeridda Xashiishka iyo isticmaalkiisa!
Thursday April 23, 2020 - 14:30:49 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Fadhi ay magaalada Beyruut ku yeesheen golaha baarlamaanka dawaaqiidda Lubnaan ayay ku meel mariyeen xeer murun badan dhaliyay oo ku saabsanaa arrimaha dhaqaalaha wadankaasi oo sanadadii dambe sii gebi dhaclaynayay.
Nabiih Barri oo ah guddoomiyaha baarlamaanka Lubanaan ayaa sheegay in inta badan xildhibaanada baarlamaanka ay isku raaceen in dalka lagu beeri karo maandooriyaha Xashiishka iyadoo lagasii samaynayo daawo,dowladda dabadhilifka Lubnaan ayaa heshiis lagashay shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka oo qaabilsan latalinta arrimaha maaliyadda.
Shirkaddan ayaa ku talisay in dalka Lubnaan lagu beero Xashiishadda kadibna laga iibiyo shirkadaha dawooyinka soo saaro arrinkaas oo ay ogolaatay xukuumadda dabadhilifka ah ee kajirta wadanka Lubnaan.
xukuumadda uu madaxda ka yahay Jiiraan Baasil ayaa sheegtay in Xashiish beerista ay qeyb weyn ka qaadan doonto soo kabashada dhaqaalaha wadanka islamarkaana ay shaqa ka heli doonaan kumanaan dhalinyara ah waana isku day lagu doonayo in qiil looga dhigo maandooriyahan xaaraanta ah.
Wasaaradda beeraha dowladda Lubnaan waxay sheegtay in Xashiishka lagu beeri doono mandiqadda Albiqaac islamarkaana miraha xashiishka lawarshadayn doono kadibna laga iibinayo shirkadaha waaweyn ee dawooyinka soo saara.
Xashiishka ayaa ah maandooriye xaaraan ah waxaana tallaabadan ka carooday culimaa'udiinka muslimiinta sunniga ah ee Lubnaan oo sheegay in go'aankan meel ka dhacay weyn uu ku yahay muslimiinta mandiqadda oo idil.
Lubanaan waa dalka afaraad ee lagasoo saaro xashiishka waxaana xusid mudan in horay beeridda xashiishka iyo ka ganacsigiisa uu mamnuuc uga ahaa Lubnaan oo ciddii lagu helo ay mutaysan jirtay xarig iyo ganaax lacageed.
Baarlamaanaatka dawaaqidda ah ayaa xaaraantinimeeyo waxa uu Alle xalaaleeyay iyagoo xalaaleeya waxa uu Alle xaaraan ka dhigay waana qowm dulloobay oo meel uga dhaca shareecada suuban ee islaamka.
Safiirkii Dowladda Shiinaha uqaabilsanaa Yahuudda oo si mugdi kujira udhintay.
Dowladda Turkiga oo ku hanjabtay in ay beegsan doonto Khaliifa Xaftar.